Isibhakabhaka esigcwele izinkanyezi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isibhakabhaka esigcwele izinkanyezi
Siphila kwiplanethi enhle kakhulu, lapho kuhlala khona izinhlobo eziningi zezitshalo nezilwane ezenza konke okusemandleni ukusinda nokuzivumelanisa nezwe lapho kufanele zibhekane nezinselelo eziningi nsuku zonke. Kepha, uma emini singabona imibala ehlukahlukene nezinhlobo zokuphila, ebusuku umbukiso uyaqhubeka, kuphela kulokhu protagonist isibhakabhaka esigcwele izinkanyezi.
Izikhathi ezimbalwa kakhulu siyabona, hhayi ngeze, kulula ukukhohlwa ukuthi kukhona eminye imihlaba ngaphandle lapho, mhlawumbe, kukhona impilo. Zonke lezo zigidi zamachashazi akhanyayo kwesinye isikhathi esizibonayo empeleni ziyizinkanyezi, amaplanethi, izinkanyezi ezinomsila kanye nama-nebulae abekhona ezigidini zeminyaka eyedlule.
1 Umlando omfushane wesayensi yezinkanyezi
2 Kuyini ukungcoliswa kokukhanya?
2.1 Ingabe zikhona izixazululo?
3 Izinganekwane ngezinkanyezi
3.3 IMilky Way
3.4 I-Krttika eyisikhombisa
4 Izindawo ezinhle kakhulu zokubona izinkanyezi
4.1 I-Monfragüe National Park (Cáceres)
4.2 IMauna Kea Observatory (eHawaii)
4.3 I-Las Cañadas del Teide (Tenerife)
4.4 Ugwadule LwaseSinayi (IGibhithe)
5 Izithombe eziningi zesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi
Umlando omfushane wesayensi yezinkanyezi
Ngiyabuthanda ubusuku. Ukuthula okuphefumulwayo kuyamangalisa, futhi lapho isibhakabhaka sicacile futhi ubona ingxenye encane kakhulu yendawo yonke, kuyinto engakholeki. Impela leyo mizwa nemizwa yokuthi bonke abalandeli besayensi yezinkanyezi noma, ngokumane, bebuka isibhakabhaka nabo babe nezazi zokuqala zezinkanyezi.
Isayensi yezinkanyezi, ngasendleleni, yisayensi endala kakhulu. Yonke imiphakathi yabantu ebikhona futhi -ngenzeka- inikezelwe ekubhekeni isibhakabhaka. Isibonelo yi-Stonehenge, ukwakhiwa kwe-megalithic okwakhiwe cishe ngama-2800 BC. C. okuthi, uma kubukwa enkabeni yayo, kukhombise ukuqondiswa ngqo kokuphuma kwelanga kusihlwa.
EGibhithe, abakhi bemipiramidi yaseGiza, Cheops, Khafre neMenkaure (oofaro abangabendlu yobukhosi be-IV) benza imisebenzi yabo cishe ngo-2570 BC. C. ukuze zihambisane nebhande lika-Orion. Yize okwamanje izinkanyezi ezintathu ze-Orion zakha i-engeli eyehluka ngama-degree ambalwa kuleyo yamaphiramidi.
Kodwa-ke, kwaze kwaba yiminyaka eminingi kamuva, ngoMeyi 1609, lapho ungqondongqondo uGalileo Galilei esungula isibonakude esizosebenza ukucwaninga, ngokuningiliziwe izinto zaphezulu.. Ngaleso sikhathi, eHolland, eyodwa yayisivele idaliwe eyasivumela ukuthi sibone izinto ezikude, kepha ngenxa yamaGalilei avumela isithombe ukuthi sikhuliswe kusuka kasishiyagalombili kuya kweziyisishiyagalolunye, ezinye izinto eziningi zazingabonakala, ukuze konke okwakungabonakala kungafundwa futhi kuhlolisiswe. kwakubonakala esibhakabhakeni.
Ngakho-ke, kancane kancane abantu bakwazile ukubona ukuthi yiLanga hhayi uMhlaba owawusenkabeni yakho konke, okwaba wushintsho olukhulu uma kubhekwa ukuthi, kuze kube yileso sikhathi, umbono wezwe kwendawo yonke.
Namuhla sinezibonakude nezibonakude ezisivumela ukuthi sibone okuqhubekayo. Abantu abaningi ngokwengeziwe abaneliseki ngokubona izinto amehlo abantu angazibamba ngamehlo, kepha ngubani okulula kakhulu kunakuqala ukubona izinkanyezi ezinomsila, i-nebulae, ngisho, uma isimo sezulu sihle, imithala esondele kakhulu. Kepha kunenkinga ebingakabikho ngaphambili: ukungcoliswa okuncane.
Kuyini ukungcoliswa kokukhanya?
Ukungcola okulula kuchazwa njengokukhanya kwesibhakabhaka sasebusuku okukhiqizwa ukukhanya okungekuhle okwasemadolobheni. Izibani zamalambu asemgwaqweni, ezezimoto, ezezakhiwo, njll. zingumgoqo wokujabulela izinkanyezi. Futhi isimo siya ngokuya siba sibi njengoba inani labantu emhlabeni landa.
Inemiphumela eminingi, kufaka phakathi okulandelayo:
Kumoshwa amandla nemali.
Zibamba iqhaza ekuguqukeni kwesimo sezulu.
Zishintsha imijikelezo yezinhlobo zezilwane ezahlukahlukene, kanye nezitshalo.
Ukubonakala kwesibhakabhaka ebusuku kulahlekile.
Ingabe zikhona izixazululo?
Kunjalo Yebo. Ukukhanyisa amalambu angaphandle amahora ambalwa kuphela, usebenzisa amandla okonga ugesi, ukubeka amalambu emigwaqo ukugwema izithiyo (njengamagatsha ezihlahla), kanye / noma ukusebenzisa imiklamo enezikrini ezigwema ukusabalala kokukhanya phezulu ngezinye zezinto bebengakwenza ukunciphisa ukungcoliswa kokukhanya.
Izinkanyezi bezilokhu ziyizinto zezinkolelo umuntu adale ngazo izindaba ezinganekwane. Isibonelo yiPleiades (igama elisho ukuthi "amajuba" ngesiGreki). EGrisi Lasendulo Indaba yatshelwa ukuthi umzingeli u-Orion wathandana noPleione namadodakazi akhe, abazama ukubaleka kuye kodwa baphumelela kuphela lapho uZeus, eminyakeni eyalandela, ebaguqula baba ngamajuba endizela esibhakabhakeni ukuze ibe yiqembu lezinkanyezi esisazi namuhla njengePleiades.
Ngokusho kukaPawnee, isizwe somdabu esisenkabeni yeNyakatho Melika, unkulunkulu uTirawa wathumela izinkanyezi ukuthi zisekele isibhakabhaka. Abanye banakekele amafu, umoya nezimvula, obekuqinisekisa ukuzala koMhlaba; kodwa-ke, kwakukhona abanye abahlangabezana nesikhwama seziphepho ezibulalayo, esaletha ukufa emhlabeni.
AbaseMaya bakukholwa lokho iMilky Way kwakuyindlela lapho imiphefumulo yayihamba iye ngaphansi komhlaba. Izindaba ezixoxwa yilaba bantu, abakha enye yezimpucuko eziphambili kakhulu zesikhathi sabo, zisuselwa ebudlelwaneni bokuhamba kwezinkanyezi. Kubo, ibhande elime mpo leMilky Way elisabonakala nanamuhla uma isibhakabhaka sicacile, belimele umzuzu wokudala.
ENdiya kunenkolelo yokuthi izinkanyezi zeBig Dipper yilokho okwakuthiwa yiRishis: izazi eziyisikhombisa ezazishade nodade abayisikhombisa baseKrttika ababehlala nabo esibhakabhakeni esenyakatho kwaze kwaba yilapho u-Agni, unkulunkulu womlilo, ethandana nodadewabo baseKrtika. Ukuzama ukukhohlwa uthando aluzwa, u-Agni waya ehlathini lapho ahlangana khona noSvaha, inkanyezi uZeta Tauri.
USvaha wathandana no-Agni, futhi ukumnqoba lokho akwenza kwaba ukuzifihla njengomunye wodade baseKrtika. U-Agni wayekholelwa ukuthi ekugcineni unqobile abafazi baseRishis. Ngokushesha ngemuva kwalokho, uSvaha waba nendodana, ngakho-ke amahemuhemu aqala ukusabalala ukuthi abafazi bakaRishis abayisithupha babengunina, okwaholela ekubeni abayisithupha kwabayisikhombisa bahlukanise amakhosikazi abo.
U-Arundhati nguyena kuphela owahlala nomyeni wakhe owayebiza inkanyezi u-Alcor. Abanye abayisithupha bahamba baba yiPleiades.
Izindawo ezinhle kakhulu zokubona izinkanyezi
Njengoba ubhekene nokungcola okuncane, into engcono kakhulu ongayenza ukufika kude namadolobha ngangokunokwenzeka noma, okungcono nokho, hamba uye kwenye yalezi zindawo:
I-Monfragüe National Park (Cáceres)
Isithombe - UJuan Carlos Casado
IMauna Kea Observatory (eHawaii)
Isithombe - UWally Pacholka
I-Las Cañadas del Teide (Tenerife)
Ugwadule LwaseSinayi (IGibhithe)
Isithombe - uStefan Seip
Kepha… futhi uma ngikwazi ukuhamba, ngenzenjani? Yebo, kuleso simo into enhle kunazo zonke kungaba ukuthenga isibonakude esikhiphekayo. Ilula kakhulu ukuyisebenzisa futhi idinga ukunakekelwa okuncane (ngaphandle kokuyigcina ihlanzekile 🙂). Ukusebenza kwalesi sibonakude kusekelwe ekukhanyeni kokukhanya okukhishwe yiso. Lapho umsebe okhanyayo udlula phakathi kwezinkuni, uzoshintsha umzila wawo ubangele isithombe esikhulisiwe sento ebhekwayo ngaleso sikhathi.
Intengo yesibonakude sokuqalisa esichasayo iyathakazelisa impela, futhi ingabiza cishe ama-euro angama-99.
Izithombe eziningi zesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi
Ukuqedela sikushiya nezithombe ezimbalwa zesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi. Kujabulele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izithombe » Isibhakabhaka esigcwele izinkanyezi
Uriel u-esquivel kusho
Yithi kuphela iplanethi enezimfanelo ezinhle (umoya, amanzi, umlilo, umhlaba) kanye… nokungabalulekile.
Ubuhle beZulu bukhulu kakhulu, abupheli; amandla enkanyezi yethu yenkosi asiphonsa "izinhlansi" zezipho zakhe futhi asimboze nge-polar auroras ngamandla akhe phezulu kumazibuthe wethu ukugcwalisa abafundi bethu ngokumangala futhi asinikeze i-Ether, ngemuva, ngaphezu kokuba amasu aphakeme yize uzokwazi ukuqonda okuthe xaxa ngalokho Preciousness, bonga uNkulunkulu.
Phendula u-Uriel Esquivel
Ingabe amagagasi abandayo ahlobene nokushintsha kwesimo sezulu?